Johnson iyo xisbigiisa oo ku guuleystay doorashadii Britain – Hornafrik Media Network
Johnson iyo xisbigiisa oo ku guuleystay doorashadii Britain
By Liibaan Nuur	 On Dec 13, 2019
Ra’iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo xisbigiisa Conservative-ka ayaa ku guuleystay inta badan 650-ka kursi ee baarlamanka dalkaas.
Ayada oo waxyar mooyee dhammaan natiijada kuraasta shaaca laga qaaday, ayaa xisbiga ra’iisul wasaare Boris Johnson waxa uu xaqiijiyey 364 kursi, taasi oo ah guushii ugu weyneyd ee xisbigu gaaro tan iyo xilliyadii ra’iisul wasaare Margaret Thatcher ee sidaatamaadkii.
Guusha xisbiga Conservative-ka ee doorashadan lasoo hormariyey ayaa xal muddo la sugayey u heli doonta ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub, oo cod-bixiyayaasha ay ku ansixiyeen afti sanadii 2016.
Isaga oo cambaareynaya saddex sano oo ahaa is-marin waa siyaasadeed oo ka dhashay Brexit, ayaa Johnson waxa uu khdibaddiisii guusha wacad ku maray inuu soo geba-gebeyn doono ka bixitaanka Britain ee Yurub 31-ka bisha Janaayo ee soo socota.
Dhinaca kale, xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Labour-ka ayaa waxaa asiibay guul-darradii ugu xumeyd ee doorashada tan iyo ka hor dagaalkii labaad ee adduunka, taasi oo ku qasabtay hoggaamiyahooda Jeremy Corbyn inuu ku dhowaaqo qorshe uu uga tagayo hoggaanka.
Muxuu yahay ujeedka safarka uu Kheyre maanta ugu baxay Qatar?
Maxuu ahaa u jeedka kulankii dhex maray Axmed Madoobe, Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan?